डिजल पेट्रोल कार भारत र चीनमा प्रतिबन्धको तयारी, नेपालमा किन्नेको मारामारी... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
डिजल पेट्रोल कार भारत र चीनमा प्रतिबन्धको तयारी, नेपालमा किन्नेको मारामारी…
नेपालका दुई छिमेकी देश भारत र चीनमा प्रदुषण बढाएको भन्दै पेट्रोल र डिजल कार बिक्री तथा संचालनमा प्रतिबन्धको तयारी भईरहेको छ तर नेपालमा भने त्यस्ता कार खरिद गर्नेहरु तछाड मछाड गरिरहेका छन् । खासगरी दशै तिहारको मौका पारेर ब्यवासायीहरुले अनेक छुट र सुबिधाको बिज्ञापन गर्दै केही बर्षमा नै पत्रु बनाउनु पर्ने त्यस्ता कारहरु सर्बसाधारणलाई भिडाईरहेका छन् ।
खासगरी नेपाली सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु सेयर बेचेर महंगो कार किन्नेतर्फआकिर्षत हुने गरेको देखिएको छ, यसले उनीहरुको लगानीमा जोखिम बढाएको छ ।
हालै काठमाडौमा तामझामसहित आयोजना गरिएको नाडा अटो शोमा तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार खरिद बिक्रीको सम्झौता भयो । भारत र चीनमा कार बजारमा कार बिक्री बन्द हुनै लागेको बेला त्यहाँ बिक्ने संभावना नभएका कारहरु नेपाल भित्र्याएर सर्बसाधारणलाई चर्को मूल्यमा बिक्री गरिएको बताईन्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले हालै सवारी कर्जामा ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने गरी कर्जाको सिमा बढाईदिएको कारणले सवारी ब्यापारीहरु हौसिएका छन् । उपभेक्ता पनि बढी कर्जा पाईने भयो भन्दै कार चढ्ने रहर पुरा गर्न तम्सिएका छन् तर उनीहरु फस्दैछन् भन्ने कमैलाई थाहा होला ।
भारतले सन् २०३० पछि डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने कारहरुलाई सडकमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने पुरा तयारी गरिसकेको छ । त्यहाँका कार निर्माता तथा आयातकर्ता कम्पनीहरुलाई डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने कार निर्माण तथा आयात रोक्न र विद्युतीय कारहरुको उत्पादन थाल्न निर्देशन गरिसकेको छ । सन् २०३०पछि त्यहाँ कुनै पनि डिजल पेट्रोल कारहरु सडकममा गुड्ने छैनन् ।
त्यसैगरी विश्वको सबैभन्दा ठूूलो कार निर्माता तथा उपभोक्ता चीनको सरकारले डिजल तथा पेट्रोल कार निर्माण तथा आयातमा प्रतबिन्ध लाग्ने कुरा निश्चत रहेको बताएको छ । त्यहाँका उद्योग सहायकमन्त्रीले प्रतिबन्ध निश्चित भए पनि कहिलेदेखि कार्यान्यवनमा आउँछ भन्ने कुरा तय हुन बाँकी रहेको संचारमाध्यमलाई बताएका छन् ।
चीनमा बिद्युतीय कार किन्नेहरुको संख्या बढेसँगै धमाधम चार्जिड. स्टेशनहरु निर्माण गरिएदै छन् । सन् २०२५ सम्ममा चीनको सडकमा २० प्रतिशत भन्दा बढी बिद्युतीय कारहरु हुनेछन् ।
बेलायत र फ्रान्सले यसअघि नै डिजल र पेट्रोल कारमा प्रतिबन्धको घोषणा गरिसकेका छन् । विश्वका कयौं देशहरुमा पनि बिद्युतीय कार मात्रै चलाउन पाईने नियम बनिसकेको छ । यसमा हाम्रै छिमेकी भुटान पहिलो लहरमा छ ।
प्रदुषण र कार्वन उत्सर्जन घटाउने अभियानको रुपमा डिजल र पेट्रोल कार प्रतिबन्धको क्रम सुरु भएको हो । बिश्वका ठूला कार निर्माता कम्पनीहरु बिद्युतीय कार निर्माणलाई तीब्र पार्दैछन् । खासगरी टेस्ला र भोल्भो जस्ता विश्वका ठूूला कार निर्माता कम्पनीहरुले बिद्युतीय कार उत्पादनमा जोड दिदै विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिनियाँ कार बजारबाट फाईदा लिने प्रतिस्पर्धामा छन् ।
विश्वमा म्याद सकिनै लागेका डिजल र पेट्रृालबाट चल्ने कारहरु नेपालमा महंगो मूल्यमा किनेर उपभोक्ताहरु फस्ने खतरा बढेको छ । खासगरी दर्शै र तिहारमा संचालन गरिने आकर्षक छुट, उपहार र योजनाका नाममा नेपाली कार उपभोक्ताहरु नफसुन भन्ने कुरामा स्वयं उनीहरु नै चनाखो हुनुपर्ने आबश्यकता छ । – शेयर लगानीबाट साभार